प्रतिनिधिसभा बैठक :- प्रधानमन्त्रीविरुद्ध आजै अविश्वासको प्रस्ताव पेस हुनेबारे अन्योल | सुदुरपश्चिम खबर
प्रतिनिधिसभा बैठक :- प्रधानमन्त्रीविरुद्ध आजै अविश्वासको प्रस्ताव पेस हुनेबारे अन्योल
काठमाण्डौ – पुनःस्थापनापछि प्रतिनिधिसभाको पहिलो पहिलो बैठक आज बस्दै छ ।
फाल्गुन २३, २०७७
गएको पुस ५ गते विघटनको घोषणा भएको प्रतिनिधिसभालाई सर्वोच्च अदालतले गएको ११ गते पुनःस्थापना गरिदिएको थियो । संसद पुनःस्थापना भएको १३ दिनभित्र बैठक बोलाउन सर्वोच्चले आदेश दिएकाले आज दिउँसो ४ बजेका लागि बैठक आह्वान गरिएको हो ।
फेरि ओली नै प्रधानमन्त्री बन्ने पक्का
प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाको घोषणापछि नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिनुपर्ने प्रधानमन्त्री ओलीमाथि दबाब रहेपनि उहाँले राजीनामा दिनुभएको छैन । प्रधानमन्त्री ओलीले संसदमा अविश्वासको प्रस्ताव सामना गर्ने तर राजीनामा नदिने र विश्वासको मत पनि नलिने मनस्थिति बनाउनुभएको छ । हिजोको नेकपाको ओली समूहको संसदीय दलको बैठकले पनि यही निर्णय गरेको थियो ।
यस्तै नेकपाको प्रचण्ड–नेपाल समूहले बैठक बस्नुअघि राजीनामा नदिए अविश्वासको प्रस्तावमार्फत हटाउने बताउँदै आएको छ । अविश्वासको प्रस्तावमार्फत प्रधानमन्त्री ओलीलाई हटाउन अरु दलको सहयोग आवश्यक पर्ने र अरु दलले अहिले नै निर्णय नगरिसकेकाले आज नै अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्ने कि नगर्ने भन्नेमा प्रचण्ड–नेपाल समूहले निर्णय गरिसकेको छैन ।
नेपाली कांग्रेसले नेकपा विभाजित नभएसम्म कुनै एउटा गुटलाई मात्रै समर्थन गरेर अघि बढ्न नसक्ने प्रतिक्रिया दिँदै आएको छ । तेस्रो ठूलो दल जसपाले पनि निर्णय गरिसकेको छैन । अविश्वासको प्रस्ताव फेल भयो भने तत्काल फेरि अर्को अविश्वासको प्रस्ताव पेस गर्न नमिल्ने भएकाले आज नै प्रस्ताव पेस हुनेबारे अन्योल छ ।
आजको कार्यसूचीमा यो विषय भने समावेश भएको छैन । आजको बैठकमा ८ वटा सम्भावित कार्यसूची प्रस्ताव गरिएको छ । यसअघि नै प्रतिनिधिसभाका ३८ र राष्ट्रियसभाका २५ विद्येयक अड्किएर बसेको छ । तर विधेयकहरुमाथि छलफलमा भन्दा सत्ता गठबन्धनको मुद्दाले बैठकमा प्राथमिकता पाउने देखिएको छ ।
यसैबीच, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) राजनीतिक रुपमा विभाजित भए पनि कानुनी रुपमा अहिलेसम्म विभाजित नभइसकेकाले आजको संसद बैठकमा दुवै समूहका सांसदहरु सत्ता पक्षकै बेन्चमा बस्नेछन् । दल विवादका कारण फरक–फरक ठाउँमा बस्ने भन्ने नहुने संसद सचिवालयका प्रवक्ता रोजनाथ पाण्डेको भनाइ छ । उज्यालो अनलाइन बाट सभार
कञ्चनपुर निर्माण व्यवसायी संघको २४ औँ साधारण सभा सम्पन्न
कोरोना : केही सत्य, केही भ्रम, केही कहानी!!
नेपाल समूहको ’युटर्न’पछि बहुमतीय सरकारको सम्‍भावना सकियो, फेरि ओली प्रधानमन्‍त्री नियुक्त हुँदै !!